Ahoana ny fomba fatoriana haingana: Fomba 8 hihemorana amin'ny ora firaketana - -Kevi-Pitantanana
Mialona ny olona rendrika hatory ve ianao raha vantany vao mikapoka ondana ny lohany?
Ny torimaso tsara dia singa iray tena ilaina amin'ny fiadanantsika ara-batana sy ara-tsaina ka momba ny fotoana dia nianaranao fika sasany izay afaka manampy anao hahita ny lalanao mankany amin'ny tany nodona amin'ny fotoana fohy indroa.
Miezaha mampihatra iray na maromaro amin'ireto teknika manaraka ireto mba hatory haingana ary hanome anao izany torimaso lalina sy milamina tena irinao.
1. Mitadiava adin-tsaina ary avelao handeha izy
Rehefa eo am-pandriana dia mandry eo an-damosinao ary akimpio ny masonao. Manomboka amin'ny rantsan-tongotra sy ny fiasan'ny vatanao, atokàny ny faritra tsirairay ary miezaha hiala sasatra tanteraka amin'ny hozatra mety rehetra.
Ho gaga ianao amin'ny habetsaky ny fihenjanana mitazona ny hozatrao na dia misosa eo an-damosinao aza ianao ary mieritreritra fa milamina tanteraka. Ny ankabeazan'ny vatanao dia milamina tanteraka mandritra ny alina ka ny fidirana amin'io fanjakana io dia afaka manafaingana ny fiandohan'ny torimaso.
Diniho manokana ny fihenjanana amin'ny tendanao, ny soroka ary ny hozatry ny tarehy.
2. Miadia amin'ny torimaso ary ho resy ianao (na dia mandresy aza)
Efa nanandrana niambina ve ianao na dia milaza aminao aza ny sainao hanidy ny masonao dia hatory? Raha izany dia ho azonao ny fomba anampian'izany anao hisintaka rehefa hitanao fa sarotra izany.
Midira ao am-pandriana, vonoy ny jiro, fa tsy manidy ny masonao dia miezaha hisokatra hatrany. Raha maizina tsara ny efitranonao (izay tokony hatao raha te hatory tsara ianao) dia tsy ho hitanao loatra ary io dia ampahany amin'ny dingana atao.
Ny eritreritsika dia matetika mahatonga ny tsy fahitanay torimaso, saingy mety ho sarotra kokoa ny maka sary an-tsaina ny fototry ny adin-tsaina sy ny fanahiana rehefa mivoha ny masontsika raha mihidy izy ireo. Noho izany, ny fijerena ny maizina ao amin'ny efitranonao dia manamora kokoa ny famonoana ny sainao.
Miadia ny filana avelanao hilatsaka ny hodi-masonao satria ity ezaka ity dia hanampy amin'ny fanakanana ireo eritreritra tsy ilaina rehetra manandrana mitazona izany raha mbola azonao atao.
Amin'ny farany, na izany aza, ho resy amin'ny ady ianao ary hahita ny tenanao milentika mangina.
3. Alao an-tsaina ny loko fotsy na mainty
Raha ny fisokafan'ny masonao dia tsy misakana ny eritreritra tsy hiditra ao an-tsainao, azonao atao ny manandrana an'ity teknika ity.
Akatony ny masonao amin'ity indray mitoraka ity, fa andramo alao sary an-tsaina ny loko fotsy mameno ny sehatry ny fahitana manontolo anao. Isaky ny mitady eritreritra hafa hiditra ao an-tsainao ianao dia ekeo izany, fa miverena mahitsy amin'ny fotsy izay mameno ny fahatsapanao rehetra.
Ny olona sasany mety mahita fa ny mainty na ny loko hafa dia manampy kokoa, fa na inona na inona safidinao, dia ataovy ho ny hevitrao ihany izany.
maninona aho no mieritreritra be loatra ny zava-drehetra eo amin'ny fifandraisako
Na ho ela na ho haingana dia ho hitanao fa ny eritreritra sendra mamaky ny rindrin'ny lokoo, saingy tokony ho ireo dingana voalohany amin'ny nofy izay manambara fa matory ianao.
4. Avelao ny sainao hirotsa
Mety tsy mifanohitra izany, fa ny famelana ny sainao hikorisa amin'ny eritreritra tsirairay avy dia mety ho làlana hafa mankany amin'ny fanjakana nofinofy.
Ny zava-dehibe eto dia ny tsy famelanao ny saina hieritreritra izay eritreritra lava loatra fa tokony havelanao hitsambikina mifandimby.
Ity teknika ity dia mitaky fanazaran-tena sy ezaka kely hampiala ny baolina, saingy manahaka ny fomba fiasan'ny saina manonofinofy izany ary mety ho fanampiana mahomby tokoa amin'ny torimaso.
5. Aza adino ny miaina
Ok, noho izany dia tsy afaka manadino miaina ianao, fa ny fomba fitsofohana sy ny fofonainao dia afaka manampy amin'ny fametrahana ny vatanao amin'ny fanjakana marina mba hanombohana torimaso.
Na dia misy aza ny fomba fanao miaina manokana izay noresahina tao amin'ny Internet, toy ny 4-7-8 Breath, ny ankamaroan'ny olona dia mila manaraka ny fanaony manokana mifototra amin'ny fofonaina lalina, mitazona azy mandritra ny fotoana iray, alohan'ny hisintomana tsimoramora mandra- foana ny havokavokao.
Na dia mety hanampy aza ny fanisana ny dingana tsirairay, dia mety ho variana loatra amin'ny fanatanterahana ny fotoana ianao fa tsy hiala sasatra - izay no tena karazana fofonaina mahatsiaro tena.
Ny tsara indrindra dia ny manaraka ny lamina voajanahary anao izay matetika dia midika fanalavam-potoana tsikelikely isaky ny miaina sy mivoaka rehefa miadana ny fonao ary miala sasatra ny vatanao.
6. Mihainoa fisaintsainana mitarika
Raha toa ka tsy manampy ny sainao hampiadana sy hiala sasatra ireo fomba etsy ambony, dia mety ho mendrika hampiasa vola amin'ny fisaintsainana mitari-dalana.
Olona an-tapitrisany no mampiasa ireo mba hiala sasatra sy hiala sasatra alohan'ny hatory, ny fifangaroan'ny sary an-tsaina sy ny fahatsiarovan-tena dia manampy amin'ny fanelingelenana ny sainao amin'ireo eritreritra rehetra manakana anao tsy hatory.
Matetika ny mpihaino dia matory alohan'ny faran'ny fisaintsainana ary satria izy ireo dia azo alaina ho mp3 tsy latsaky ny dolara, dia tsy misy atiny mihitsy ny fanandramana azy ireo.
7. Midina miaraka amina fahazarana mahazatra
Zavaboary voajanahary tanteraka ho an'ny ray aman-dreny ny mamorona fahazarana ho an'ny zanany amin'ny ora fatoriana ary naseho fa mampitombo ny kalitaon'ny torimason'ny zaza izany.
Ny tsy fahita firy, dia ny fanaovan'ny olon-dehibe ny fanaony, na dia misy vokany tsara aza izany. Manontania tena hoe inona ny fanaonao mahazatra alohan'ny hatory - ary tsy tafiditra ao ny fanosorana nify na ny fanesorana ireo makiazy.
Raha ny tokony ho izy dia te-hihodina 30 minitra farafahakeliny ianao alohan'ny fotoam-pandriana napetraka mba hialana sasatra kokoa ny vatanao sy ny sainao. Midika izany fa fanapahana hetsika izay misy fientanam-po na ara-tsaina.
Ny karazana zoro kely lalovanao isan-kariva dia afaka manampy amin'ny famoahana ny fihenjanana mety hitranga amin'ny vatanao raha toa ka mety hisy vokany mampitony ao an-tsaina ny fahatsiarovan-tena 10 minitra.
Ny mamaky dia mpialoha lalana mahomby amin'ny torimaso ho an'ny maro, alao antoka fotsiny fa tsy mampientam-po loatra izany dia ho tianao ihany koa ny tsy mamaky amin'ny fitaovana backlit na miaraka amin'ny jiro efitrano mamiratra.
Andramo ny tsy mijery fahitalavitra na mijery ny laptop na telefaona mandritra ny antsasak'adiny farany amin'ny andronao. Izay rehetra miteraka hazavana be dia be miditra ao amin'ny masonao dia tsy maintsy hiteraka hormonina manaitra anao hatrany.
Amin'ny fifikirana amin'ny fahazarana iray, dia hametraka ny famantaranandron'ny vatanao ianao hanantenanao ny torimaso amin'ny fotoana iray ary aorian'ny hetsika sasany nitranga. Tsy tokony hatao ambanin-javatra mihitsy ny lanjan'ny famantaranandron'ny vatanao.
8. Mihinàna ny fatorianao
Ny sakafo hohaninao dia misy fiatraikany amin'ny fomba famokaran'ny vatanao sy ny fampiasana ireo akora simika ampiasaina amin'ny torimaso.
Raha tsy miditra amin'ny siansa amin'izany rehetra izany, ny fitambaran'ny gliosida sy proteinina sarotra dia sakafo maivana mety hananana adiny iray na mahery alohan'ny hatory satria izany dia hanome ireo vato manorina sy fanamafisana ilain'ny vatanao hamokatra ireo fitaovam-piterahana torimaso ireo.
Granola lovia kely misy ronono ambany tavy, na fromazy fanosotra amin'ny biscuit oaty dia mety indrindra. Ny fanampiana cashews, voatavo voa vitsivitsy na voana tanamasoandro dia hanome anao otrikaina tena ilaina mba hidiran'ny vatanao amin'ny fifandanjana simika mety hatory tsara.
ny dikan'ny hoe manaja olona
Ny fisainana indray: ny torimaso tsara dia zava-dehibe ary tsy tokony hanaiky zavatra kely kokoa isika. Na dia tsy mora foana ny hahatratrarana azy, ny fikirizana sy ny fampiharana dia hanampy anao any amin'ny farany.
zavatra mahatsikaiky hatao rehefa mankaleo ianao
zavatra mahatsikaiky horesahina amin'ny namana
ahoana no hahalalana raha mifarana ny fifandraisanareo
ny fomba fanoratana ny taratasim-pitiavana tonga lafatra
ny fomba fikirakirana ny fitiavana
izao dia tsy miteny mafy be ianao
fanontaniana tsy ampoizina izay mahatonga anao hieritreritra